Ra’iisul Wasaare Khayre oo ballan-qaaday in Xukuumaddiisu ay kaalin mug leh siineyso culimada si loo jebiyo fikirka qalafsan ee Al-shabaab. – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Ra’iisul Wasaare Khayre oo ballan-qaaday in Xukuumaddiisu ay kaalin mug leh siineyso culimada si loo jebiyo fikirka qalafsan ee Al-shabaab.
MUQDISHO — Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay qaar kamid ah culima’udiinka Soomaaliyeed iyo guddigii dhaqaale uruurinta ka waday dalalka Kenya iyo Uganda. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale goob-joog ka ahaayeen xubno ka mid ah Golaha Wasiiradda iyo guddiga gurmad Qaran.
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaare Khayre “Haweenka Soomaaliyeed waa inay hormuud u noqdaan xoreynta dalka
Qormada XigtaKu Xiga Shirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey Miisaaniyada 2018, hambalyana loo direy doorashooyinka Somaliland